Jwxo-shiil iyo Waftigii Kaalinka 5aad, oo Sidii ay Doonayeen ay Xaaladu u Socoto – Rasaasa News
Jwxo-shiil iyo Waftigii Kaalinka 5aad, oo Sidii ay Doonayeen ay Xaaladu u Socoto
Aug 21, 2009 Jwxo-shiil, Kilil5
Sagaal nin oo walaalo ah sideenaas, sideed isku bah tahay sideenaas ninkuna bah gaar yahay sidiisaas, ninkuna dadkii siri siduu yahay, sideeduna sirtii garanin sideenaas, hadiiba uu sidaas yahay sidiisaba, inta aynaan sun wada cunin sideenaba ma iska kala tagnaa sideenaba.
Waxaa maalintii shalay ahayd, gaadhay magaalada London, cariga Ingriiska masuuliyiintii ka socotay dawlada wadaaga ah ee Itobiya iyo kuwii ka socday Kaalinka 5aad, oo kuligood Somali ah, kolka laga reebo gabadh aan la garanaynin qoomiyada ay ka soo jeedo, laakiin loo badinayo in ay tahay Tigray.
Waftiga ayaa waxaa markii ay todobaadkii hore yimaadeen dalka Sweden, lagu qaaday werar cad oo aad moodaysay in dadku wax ay samaynayeen ay joogaan dal Afrikaan ah, Waxaana si la soo abaabulay loo dilay Maxamed Shill Kabadhe, oo wali Isbitaal yaal. Waxaana uu argagax soo gaadhay waftiga oo lagu qasbay in ay ka soo bixi waayeen dhismaha safaarada Itobiya, in kasta oo ay kolkii dambe masuuliyada qaadatay dawlada Sweden si wanaagsana ula dhaqantay waftiga.
Hadaba, waftiga oo yimid London, maalintii shalay ayaa waxaan jirin wax isu diyaarinaya in ay tusaan in ay ka soo horjeedaan ama ay dhibaateeyaan sababahan soo socda awgood;
1. Jwxo-shiil, waxaa uu amaray in la dilo Maxmed Shiil, waxaana gacanqaadka gaystay kooxiisa, kolkii uu dambigu dhacayse kooxda Jwxo-shiil iyaga ayaa ugu horeeyey wax yidhaahda Nimanka gacan qaadka la,haa waxay ahaayeen reer hebal, kolkii la duulayeyse waxay ahaayeen ONLF.
2. Iyada oo uu Jwxo-shiil ku talo galay in aan dhib dambe loo gaysan masuuliyiinta Kaalinka 5aad, gacan ka hadalkaas ka dibna meel kasta oo ay tagaan ayna dhicin cid rabashta.
3. Waxaa uu Jwxo-shiil u sii gogol xaadhayey Kulanka uu Daa,uud Axmaar kula yeelan doono Canada, safarka labaad ee uu Hogaamin doono ee ka ambabixi doona Addis Abeba.
4. Jwxo-shiil, Shaxdii uu dhiga way shaqaysay, Socdaalka Kaalinka 5aad, si xor ah ayey ku dhex mushaaxayaan Suuqyada waaweyn ee London, iyaga oo goobo badan shalay iyo maanta dalxiis ku tagay.
Dadweynaha Somalida Ogadeeniyo dambi ha is galinina, hadii aad cid dambiile ah la dagaalamaysaana waa in aad Jwxo-shiil la dagaalantaan, waayo wax walba oo xumaada isaga ayaa masuul ka ahaa. Waana dambiilaha kowaad ee mar ay noqotaba Maxkamad lagu garsooro la soo taagi doono.
Wax badan oo aydaan ogayn ayaan ogaanay waxaadna ogaan doontaan,kolka ay xeedho iyo fandhaal kala dhacaan, waxaana daliil u ah wax aad indhihiina ku aragteen ee ka dhacay Sweden. London dadka qaaraanka dadka u uruuriya Jwxo-shiil, ayey ahaayeen kuwii soo dhaweeyey Odayaashii, dadka ugu badan ee safaarada shirka ka dhici doona Sabtida August 22, 2009, waa dadka bil walba qaaraanka u uruuriya Jwxo-shiil.
Magaca Jwxo-shiil oo Laga Helay Liis Saraakiil Somali ah oo Cali Samatar Codsaday